I-UNESCO isoyikisa ngokuhlutha uStonehenge ubume beLifa leMveli leHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-UNESCO isoyikisa ngokuhlutha uStonehenge ubume beLifa leMveli leHlabathi
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Xanduva • Theme Parks • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Ngenxa yokwakhiwa kwendlela engaphantsi komhlaba, uStonehenge uyakufumana iwonga lezinto ezisemngciphekweni, eziza kulandelwa kukhutshelwa kuluhlu lwelifa lenkcubeko.
Ulwakhiwo lwendlela lusongela ubume beLifa leMveli le-Stonehenge.
Iprojekthi yepaseji engaphantsi komhlaba yamkelwa ngo-Novemba kulo nyaka uphelileyo.
Ipaseji iya kuba malunga neekhilomitha ezi-3 ubude.
I-Stonehenge inokuphulukana nenqanaba layo njengeNdawo yeLifa leMveli leHlabathi ngenxa yolwakhiwo lwetonela phantsi komda, ngokweengxelo zamva nje.
The Umbutho weZizwe eziManyeneyo wezeMfundo, iNzululwazi kunye neNkcubeko (i-UNESCO) ulumkise abasemagunyeni base-Bhritane ukuba ngenxa yokwakhiwa kwendlela engaphantsi komhlaba, Stonehenge uyakufumana iwonga lezinto ezisemngciphekweni. Kwaye oku kuya kulandelwa kukhutshelwa ngaphandle kuluhlu lwelifa lenkcubeko.
Iprojekhthi yangaphantsi komhlaba yamkelwa liSebe lezoThutho laseBritane ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Yenzelwe ukunciphisa umthwalo wezithuthi wendlela eyi-A303. Ipaseji iya kuba malunga neekhilomitha ezi-3 ubude.
I-Stonehenge sisikhumbuzo sangaphambi kwembali eSalisbury Plain eWiltshire, eNgilani, malunga neekhilomitha ezimbini entshona ye-Amesbury. Inesangqa sangaphandle samatye emileyo amileyo e-sarsen, inye nganye ijikeleze i-13 iinyawo ukuphakama, iinyawo ezisixhenxe ububanzi, kwaye inobunzima obujikeleze iitoni ezingama-25, ezixhonywe ngokudibanisa amatye e-lintel athe tye.
Ngaphakathi isangqa seebluestones ezincinci. Ngaphakathi kwezi ziitrithon ezimileyo simahla, iiSarsens ezimbini ezithe nkqo ze-Sarsens ezijoyine i-lintel enye. Isikhumbuzo sonke, ngoku esonakalisayo, sijolise ekuphumeni kwelanga kwihlobo lasehlotyeni. Amatye abekwe ngaphakathi komhlaba phakathi kwezona ndawo zixineneyo zezikhumbuzo zeNeolithic kunye neBronze yobudala eNgilane, kubandakanya namakhulu aliqela tumuli (amangcwaba).
Abembi bezinto zakudala bakholelwa ukuba yakhiwa ukusuka kwi-3000 BC ukuya kwi-2000 BC. Iibhanki zomhlaba ezijikelezayo kunye nomsele, owenza isigaba sokuqala sesikhumbuzo, sinomhla malunga ne-3100 BC. Ukuthandana kweRadiocarbon kucebisa ukuba iibluestones zokuqala zakhuliswa phakathi kwe-2400 kunye ne-2200 BC, nangona zisenokuba zazikwindawo kwangoko nge-3000 BC.
Enye yezona ndawo zidumileyo e-United Kingdom, i-Stonehenge ithathwa njenge icon yenkcubeko yase-Bhritane. Esi sisikhumbuzo esakhuselwa ngokwasemthethweni esiCwangcisiweyo saMandulo ukusukela nge-1882, xa umthetho wokukhusela izikhumbuzo zembali waziswa okokuqala ngempumelelo eBritane. Indawo kunye neendawo ezingqongileyo zongezwa kuluhlu lwe-UNESCO lweeNdawo zeLifa leMveli kwi-1986. umhlaba olingqongileyo uphethwe yiTrust kaZwelonke.